I-Sparrows Nest - I-Airbnb
Ikamelo e-ikamelo lezivakashi ibungazwe ngu-David
Isitudiyo esincane esisanda kulungiswa kabusha esinegumbi lokugezela elincane eline-ensuite kanye nendawo encane yokuhlala ngaphandle, ingxenye yendlu eyakhiwe ngamatshe yama-1950s endaweni ehlonishwayo yaseLarnaca.
Le ndawo iwuhambo lwemizuzu eyisikhombisa ukuya esontweni lasendulo laseSt Lazarous nasenkabeni yedolobha, ukuhamba ngezinyawo imizuzu eyishumi ukuya ogwini oludumile lwasePhinikoudes, uhambo lwemizuzu emihlanu ukuya ezindaweni ezingomakhelwane zaseTurkey ezingakathintwa.
Eduze kwazo zonke izinsiza (izimakethe ezincane, ama-kiosks, ukuqashwa kwezimoto, iziteshi zikaphethiloli).
Isitudiyo siyingxenye yesakhiwo esikhulu esakhiwe ngamatshe ngemuva. Kuyikamelo elikahle elinombhede ophindwe kabili, ikhabethe, ihhovisi elincane, ifriji elincane, iketela, i-cutlery, izinkomishi (itiye, ikhofi). Igumbi linendlu yangasese yangasese kanye neshawa. Kunesimo somoya esisha, i-wi-fi yamahhala, nesifudumezi samanzi sakamuva sobuchwepheshe eshaweni (hhayi ukuthi uzosidinga ngesikhathi sasehlobo).
Ngaphandle unendawo yakho yokuhlala encane yangasese enetafula elingadini.
Ifulethi lingamamitha-skwele angama-20 kodwa lizwakala lithokomele futhi linakho konke umbhangqwana ongakudinga ukuze uhlale unethezekile.
Iyindawo ephephe kakhulu. Indawo yaseFaneromeni ibhekwa njengenye yezindawo ezinhle kakhulu eLarnaca.
Indlu enkulu isemgwaqweni omkhulu kanti istudiyo singemuva. Ngemuva kunendawo egcinelwe izihlahla nesikole.
Kunezitolo, ama-kioki avame ukuvula amahora angama-24 maqondana nje nomgwaqo.
Izindawo zokudlela, amabha, izitolo nanoma yini ongase uyidinge isendaweni efushane yokuhamba ngezinyawo
Zizwe ukhululekile ukusithinta ngocingo noma mathupha ngazo zonke izidingo zakho. Siyajabula ukuphendula noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo futhi sizame ukwenza ukuhlala kwakho kukhululeke ngangokunokwenzeka.